प्रहरीले बच्चा बोकेकी महिलामाथि ला”ठी प्र”हार गर्ने इन्सपेक्टरलाइ कारवाही गर्दै खोस्यो जिम्मेवारी ! — SuchanaKendra.Com
प्रहरीले बच्चा बोकेकी महिलामाथि ला”ठी प्र”हार गर्ने इन्सपेक्टरलाइ कारवाही गर्दै खोस्यो जिम्मेवारी !
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/११/१८ गते
केही दिन अघि बच्चा बोकेकी महिलामाथि ला”ठी प्र”हार गर्ने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देवीप्रसाद पौडेलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । बच्चा बोकेकी महिलालाई पछाडिबाट लाठी बर्साएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग, भैंसेपाटीको नेतृत्वबाट पौडेललाई हटाएर नयाँ इन्स्पेक्टर पठाइएको हो । भिडियो भाइरल भएपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको चर्को आलोचना भएको थियो ।
घटनाको छनाबिनपछि पौडेलको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक सुजित ओझालाई दिइएको छ । घटनाको छानबिन गर्न ललितपुर प्रहरीले एसपी दुर्गा सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। ‘अबको कारबाही के हुने भन्नेमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय हुने छ’, एसएसपी राईले भने। पूर्व जर्नेल खत्रीलाई आफ्नो पति दावी गर्ने माला शाहसहितको समूहमा मिसिएर हेमा त्यहाँ पुगेकी थिइन्।’
शाहको समूहले खत्रीको घरमा तो’डफो’ड गरेको प्रहरीको भनाइ छ। विवाहित खत्रीले आफुलाई कोठामा राखेर २२ वर्षदेखि श्रीमतीको व्यवहार गरिरहे पनि पछिल्लो समय नहेरेको दावी शाहको छ। प्रहरीले शाहलगायत केहीलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा हिरासतमा राखेको छ।